Ma ku haboon tahay Federaalka inuu xiligan Wadahadal la galo Somaliland? • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Ma ku haboon tahay Federaalka inuu xiligan Wadahadal la galo Somaliland?
February 7, 2018 - By: Hussein Farah
1-	Somaliland inta ay wado dagaalada ka socda gobalka Sool, dowlada Federaalka hadii ay wadahadal la gasho waxay noqon doontaa mid sii dhiiri gelisa xukuumada Muuse Biixi inay awood militari u adeegsato dadka kasoo horjeeda ama ha noqoto mucaaridka Somaliland dhexdeeda ama dadka iyagu kasoo horjeeda gooni u goosadka ee ku nool gobaladaasi.
2-	Somaliland xukuumadeeda waxay sidoo kale si joogto ah ugu xad gudubtaa xaquuqda muwaadiniinta dhulkeeda ku nool ee aaminsan midnimada Soomaaliya, hadii Federaalka xiligan la galo wadahadal waxay sii dhiiri gelin doontaa gabood falada iyo caburinta shacabka ku nool gobaladaasi ee aaminsan midnimada Soomaaliya.
3-	Somaliland waxay dooneysaa wadahadalkan in dib gor gortan loo geliyo mashaariicda Federaalka wado sida maamulida Hawada Soomaaliya ee laga hagi doono Muqdisho markii ugu horeysay tan iyo intuu dhacay burburkii Soomaaliya.
4-	Somaliland ayaa aaminsan in wadahadalka la furo xili ay awooda siyaasadeed ee dowlada Federaalka wiiqan tahay, taasi oo fursado badan oo siyaasadeed siineysa Somaliland doodeeda gooni isu taaga.
5-	Somaliland ayaa sidoo kale damacsan inay dar dar geliso heshiisyadeeda caalamiga ah oo hada ku xiran Dowlada la aqoonsan yahay ee Federaalka Soomaaliya, si ay sare ugu qaado awoodeeda dhaqaale taasi oo fursad u siineysa inay sii wado qorshaheeda gooni isu taaga.